Ale Jimenez | | Stews နှင့် Soups Recipes, ကျန်းမာရေးချက်ပြုတ်နည်းများ
ဇွန်းစွပ်ပြုတ်အများဆုံးဖြစ်ကြသည် အစဉ်အလာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စပိန် gastronomy ၌တည်၏။ ဤစွပ်ပြုတ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ပူနွေးလာစေရန်အေးခဲသောနေ့ရက်များတွင်အရေးကြီးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်လည်းဖြစ်သည်။
ဤ ထမင်း ၄ င်းတို့သည်အခြေခံအားဖြင့်အသားသို့မဟုတ်ငါးများပေါင်းစပ်ထားသောငံပြာရည်ရှိသောကြောင့်သူတို့သည်အလွန်ကျန်းမာကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍ အရသာနှင့်လုပ်ရန်ကြက်နှင့်အာလူးကိုအသုံးပြုကြသည် ပန်းကန်အဆာနှင့်ဖြည့်.
ခရမ်းချဉ်သီး ၂ လုံး။
ဆန် ၁၀၀ ဂရမ်။
ကျနော်တို့ထုခုတ်ပါလိမ့်မယ် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးများ.
ငါတို့လုပ်မယ် ဒယ်အိုးထဲမှာနှိုးဆော် - ကြော် ဤအပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူလုံလောက်သော။
ငါတို့ဖြတ်မယ် သေးငယ်တဲ့အန်စာတုံးကြက်သားရင်သားကင်ဆာ ပြီးတော့ငါတို့ကငံပြာရည်ထဲမှာထည့်မယ်။
ကျနော်တို့ဝိုင်သို့မဟုတ်ဘီယာထည့်ပါလိမ့်မယ်နှင့် ၁၀ မိနစ်လောက်ချက်ပြုတ်ပါမယ်.
ငါတို့အခွံပါလိမ့်မယ် အာလူးနဲ့ငါတို့ cachelos သို့ဖြတ်မည်ရေတစ်ခွက်နဲ့ဒယ်အိုးထဲထည့်မယ်။
အာလူးနူးညံ့နီးပါးဖြစ်တဲ့အခါကျနော်တို့ထည့်ပါလိမ့်မယ် ဆန် ငါတို့သည်ကောင်းမွန်စွာပြုကြမည်။ လိုအပ်ရင်ရေထည့်မယ်။
ချက်ပြုတ်ပါ 15 မိနစ် ဆန်နူးညံ့သည်အထိ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဟင်းလျာများ » Stews နှင့် Soups Recipes » ကြက်သားနှင့်ဆန်နှင့်အတူအာလူးစွပ်ပြုတ်
ဟင်းသီးဟင်းရွက် puree တစ်ထောင်